Should You Change Companies or Stay Put? How to Weigh the Pros and Cons ﻿
Should You Change Companies or Stay Put? How to Weigh the Pros and Cons
သင့်ရဲ့ ကုမ္ပဏီ(အလုပ်)ကို ပြောင်းသင့် သလား (သို့) လက်ရှိကုမ္ပဏီ(အလုပ်)မှာဘဲ ဆက်နေသင့်သလား။ အားသာချက်(ကောင်းကျိုး)နဲ့ အားနည်းချက် (ဆိုးပြစ်)တွေကို ချိန်ဆတိုင်းတာပုံ​
သင့်ရဲ့ လက်ရှိအလုပ်မှာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ သင့်ရဲ့အသက်က သင်ဒီမေးခွန်းကို ဖြေဆိုပုံအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ၂၁%နှုန်းလောက်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာ အလုပ်တွေပြောင်း ခဲ့တယ်လို့ဖြေကြပါတယ်။
အလုပ်တွေတစ်ခုပြီး တစ်ခုပြောင်းခြင်းက အမြင့်(ရာထူး)ကိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်ပြီး လစာငွေ ရရှိမှုကို တိုးလာနိုင်စေတယ်လို့လူအများစုက ထင်ကြပေမယ့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းမှာဘဲ အချိန်တွေအများကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
သင်လက်ရှိအလုပ်ရှင်ဆီမှာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုခြင်း ရှိ၊မရှိကတော့ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာရည်မှန်းချက် (Career Goals)၊ လက်ရှိသင့်ရဲ့ အလေးထားဦးစားပေး ရမယ့်အရာတွေ (Your current priorities) တွေ နဲ့ သင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ အစဉ်အလာ အပါအဝင် အကြောင်းအရာတွေအများကြီးအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းမှာ အကြာကြီးအလုပ်လုပ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ အခက်အခဲတွေ ကို ဘယ်လိုသုံးသပ်သင့်လဲဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အကြံဥာဏ်တွေရယူဖို့အတွက် ကုမ္ပဏီတစ်ချို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
အဆင့် ၁။ ကောင်းကျိုး(အားသာချက်) တွေကို စဉ်းစားပါ။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ သင့်ရဲ့လုပ်သက်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေရဲ့ အကြောင်းကို သင်ပိုသိလာမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုအတွက်ကတော့ ဒီအချက်ဟာ အလုပ်မှာပိုမိုကျွမ်းကျင်မှုရှိလာဖို့နဲ့ ပိုမိုတိုးတက်လာဖို့အတွက် ကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့သူတွေအတွက်ကတော့ ဒီအချက်ဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ စံနှုန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုပြီးလေးနက်လာတဲ့သဘော ဖြစ်နေပါသည်။
ကောင်းကျိုး(အားသာချက်)တွေကို ကိုယ်တိုင်ချရေးပါ။ သင့်အနေနဲ့ ကုမ္ပဏီမှာ သုံးနှစ်၊ ငါးနှစ် ၊ ဆယ်နှစ် သို့ ဆယ်နှစ်ထပ်ပိုပြီးလုပ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ အဲ့ဒီလိုအကြာကြီး လုပ်တဲ့ အတွက် ရရှိလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို ကြည့်ပြီး အဲဒီလို လိုက်လုပ်ဖို့အတွက် စိတ်ဓါတ် ခွန်အားရရှိလာနိုင်ပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းအသစ်တစ်ခုကို နားလည်သဘောပေါက်ရင်းနှီးဖို့ ကြိုးစားစရာမလိုဘဲ လုပ်ငန်းရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေကိုပါ လေ့လာပြီး အလုပ်မှာ ပိုမိုတိုးတက်အောင် မြင်လာနိုင်ပါတယ်။
စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန က မိမိနဲ့ မိမိရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကိုသိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်မှာထပ် စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကို ပိုပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း နိုင်မယ်။
မိမိလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ပဏာမဆောင်ရွက်ချက်တွေ ကြီးထွားလာပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့အောင် မြင်မှုမှာ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ပါဝင် အကျိုးပြုနေတာကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့နိုင် တယ်။
ကုမ္ပဏီအတွင်းမှာ မိမိနဲ့ရင်းနှီးသူတွေ ပိုများလာနေပြီး သုံးစွဲသူ(ဖောက်သည်) တွေရဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့ နေရာမှာ ပိုမိုကျွမ်းကျင်လာတယ်။
အလုပ်အတူတူတွဲလုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သဘောမျိုးသာမကဘဲ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ပါ ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်တယ်။
အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ပိုမိုလေးနက်ကျယ်ပြန်ပေါက်ရောက်တဲ့ လွှမ်းမိုးမှု (Influence) ကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။
ကုမ္ပဏီရဲ့ အဓိက စံနှုန်းတွေ ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ ပိုပြီးခိုင်မာတဲ့ ဆက်နွယ်မှု တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်။
ကုမ္ပဏီရဲ့ အတိတ်နဲ့အကြာကြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိခြင်းက ကုမ္ပဏီရဲ့အနာဂတ် ကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာ အကြံဥာဏ်တွေအများကြီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် ၂။ အားနည်းချက် (ဆိုးပြစ်) တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရိုးသားပါ။
တစ်နေရာတည်းမှာဘဲ အချိန်အကြာကြီး လုပ်ကိုင်ခြင်းမှာ အားနည်းချက်တွေရှိနေတာ ကလည်း အမှန်ပါဘဲ။အချို့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင် အလုပ်တွေ ပြောင်းလုပ်ခြင်းဟာ သင့်ကို ပိုမိုတိုးတက်လာစေနိုင်ပြီး လစာဝင်ငွေကိုလည်း တိုးလာနိုင်စေပါတယ်။ တစ်နေရာတည်း မှာဘဲ အကြာကြီးနေဖြစ်သွားပြီး တိုးတက်ဖို့အတွက် မိမိကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်မှုတွေမလုပ် တော့တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုသိထားဖို့ လိုအပ်တာကတော့ ဒီအခြေအနေတွေဟာ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား၊ သင့်ရဲ့ အဖွဲ့ အပါအဝင် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ပါ သက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာပါဘဲ။
အားသာချက်တွေရဲ့ဘေးမှာ အားနည်းချက်တွေကိုလည်း ချရေးပါ။ သင်အခုချရေးမယ့် အရာတွေက သင်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်တဲ့ အားနည်းချက်တွေသာဖြစ်ပြီးတော့ လုပ်ငန်းခွင် ပြင်ပက သင့်သူငယ်ချင်းတွေပြောတဲ့ အကြောင်းအရာတွေမဖြစ်ဖို့ သေချာအောင်ဂရုစိုက်ပါ။
- အရမ်းကို သက်တောင့်သက်သာရှိလွန်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွန်းအားမပေးနိုင်တော့ မျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။
- ဒီကုမ္ပဏီမှာ မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်(Career goals) ကိုပြည့်မြောက် အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်လောက်မှာ မဟုတ်ပါ။
- မိမိအနေနဲ့ ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ လစာငွေတွေကို လတ်လွတ်ဆုံးရှုံး သွားရနိုင်တယ်။
- ဒီလုပ်ငန်းအမျိုးအစားနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတတွေနဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေကို လိုက်မမှီတော့တာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
- မိမိရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတစ်ခု၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပုံတစ်မျိုး တည်းမှာဘဲ ကန့်သတ်ထားလိုက်သလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
- လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတည်းမှာဘဲ အလုပ်လုပ်နေရတာကို အသားကျသွားနိုင်ပြီး အခြား လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် မလုပ်ကိုင်နိုင်တော့တာမျိုးလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အဆင့် ၃။ သင့်ရဲ့ချရေးထားတဲ့ စာရင်းကို ပေါင်းလိုက်ပါ။
သင့်ချရေးထားတဲ့ အားသာချက်(ကောင်းကျိုး)တွေနဲ့ အားနည်းချက်(ဆိုးပြစ်)တွေကို စစ်ဆေးပါ။ ဘယ်စာရင်းက ပိုရှည်နေလဲဆိုပြီး တိုင်းတာခြင်းထက် ဘယ်အချက်တွေက သင့်အတွက် ပိုပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။
နောက်ထပ် ဘာဆက်လုပ်ရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် သင့်ကိုယ်သင် အောက်ပါမေးခွန်းတွေကို မေးကြည့်ပြီး အဖြေတွေကို လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ဒီအလုပ်မှာ ဆက်နေဖို့အတွက် အားသာချက်(ကောင်းကျိုး)တွေက အားနည်းချက်(ဆိုးပြစ်) တွေထပ်ပိုပြီး အလေးသာနေပါသလား။
မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်(Career goals)တွေက ဘာတွေလည်း။ အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်တွေကို လက်ရှိကုမ္ပဏီမှာရရှိနိုင်ပါသလား။
မိမိအတွက် အရေးအကြီးဆုံးဦးစားပေးက ဘယ်အရာလဲ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုလား၊ လစာငွေလား ၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုလား။
မိမိရဲ့ လေ့လာသုံးသပ်ချက်အရ မိမိရဲ့အရေးအကြီးဆုံးဦးစားပေးတဲ့ အရာတွေကို အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ရရှိနိုင်ဖို့ ပိုပြီးအခွင့်အရေးရှိနေသလား။
ဒီ Article လေးဟာ စာဖတ်သူပရိတ်သတ်တို့အတွက် အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်